WORKING कार्य समाधानहरू क्रोममा ERR_CONNECTION_RESET त्रुटि ठीक गर्न - दरहरु
प्राप्त गर्दै ERR_CONNECTION_RESET तपाईंको गुगल क्रोम ब्राउजरमा कुनै खास वेब पृष्ठ भ्रमण गर्ने क्रममा त्रुटि भयो? यो त्रुटि स an्केत हो कि केहि अवरोध भयो र जडानलाई रिसेट गर्नुहोस् जब क्रोम वेबपृष्ठ लोड गर्न प्रयास गर्दछ। त्रुटि कुनै एक उपकरण वा अपरेटि system प्रणालीको लागि निर्दिष्ट छैन। यदि तपाइँ वेब ब्राउजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्रुटिले एन्ड्रोइड, म्याक, विन्डोज and र १० लाई असर गर्न सक्दछ।
सामग्रीहरू देखाउनु १ कसरी Err_connection_reset त्रुटि ठीक गर्ने १.१ कुनै पनि पेन्डिंग अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् १.२ तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर / एन्टिभाइरस सुरक्षा असक्षम गर्नुहोस् १.3 तपाइँको इन्टर्नेट प्रोक्सी सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस् १.4 अधिकतम प्रसारण एकाई (MTU) कन्फिगर गर्नुहोस् १. TCP / IP सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् १.6 गुगल क्रोम रिसेट गर्नुहोस्
यो वेबसाइट उपलब्ध छैन google.com मा जडान अवरोध भयो। त्रुटि १०१ (नेट :: ERR_CONNECTION_RESET ): जडान रिसेट भयो
Err_connection_reset सामान्यतया तब देखा पर्दछ जब तपाईंले भ्रमण गर्न खोज्नु भएको वेबसाइट गन्तव्य साइटसँग जडान स्थापना गर्न सक्दैन। त्रुटि रेजिस्ट्री, TCPIP, वा अन्य नेटवर्क सेटिंग्समा परिवर्तनको कारण हुन सक्छ। यो तपाईंको ज्ञान बिना हुन सक्छ किनभने यो प्राय तेस्रो-पार्टी प्रोग्रामहरू द्वारा परिवर्तन गरिएको छ, प्राय जसो पीसी अप्टिमाइजेसन सफ्टवेयर, BUT एन्टिभाइरस वा अन्य तेस्रो-पार्टी फायरवालहरूको कारण पनि हुन सक्छ।
कसरी Err_connection_reset त्रुटि ठीक गर्ने
सामान्यतया केवल वेबपृष्ठ रिफ्रेस गर्दै, क्रोम पुन: शुरू गरेर वा कम्प्युटर पुनः सुरु गर्दा समस्याको समाधान हुनेछ र पृष्ठ पुनः सफलतापूर्वक लोड गर्नुहोस्। यदि होईन भने, यहाँ केहि कुशलतापूर्वक समाधान गर्न को लागी समाधान गर्न यो वेब पेज उपलब्ध छैन ERR_CONNECTION_RESET स्थायी रूपमा त्रुटि।
सरल रूपमा निःशुल्क प्रणाली अनुकूलक डाउनलोड गर्नुहोस् क्लेनर र यसलाई क्लीनअप जंक, क्यास, ब्राउजर ईतिहास प्रणाली त्रुटि फाईलहरू, मेमोरी डम्प फाईलहरू, इत्यादमा चलाउनुहोस् र रजिस्ट्री क्लीनर विकल्प चलाउनुहोस् जसले टुक्रिएको रजिस्ट्री त्रुटिहरू ठीक गर्दछ। यो उत्तम समाधान हो जुन मैले क्रोम ब्राउजरमा err_connection_reset त्रुटि ठीक गर्न फेला पार्‍यो। Clayaner चलाएपछि साधारण रूपमा विन्डोज रिस्टार्ट गर्नुहोस् र त्यसको पछि वेबपृष्ठ कुनै पनि बिना क्रोम ब्राउजरमा ठीक काम गरिरहेको छ err_connection_reset त्रुटि
कम्प्युटर कालो स्क्रिन खेल खेल्दा
कुनै पनि पेन्डिंग अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्
तपाईंले कुनै पनि पेन्डिंगको लागि पनि जाँच गर्नुपर्नेछ विन्डोज अपडेट वा तपाईंको एन्टिभाइरस वा फायरवाल अपडेटहरू। यदि तपाईंले कुनै फेला पार्नुभयो भने, तुरुन्तै तिनीहरूलाई स्थापना गर्नुहोस्। जे होस् क्रोम आफैं स्वतः अपडेट हुन्छ, तपाईंले यसको अपडेटको लागि पनि जाँच गर्नुपर्नेछ। यो गर्न, टाइप गर्नुहोस् क्रोम: // मद्दत / क्रोमको ठेगाना बारमा र इन्टर गर्नुहोस्। यसले स्वचालित रूपमा भर्खरको नयाँ अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्दछ। कुन फिक्स हुन सक्छ err_connection_reset गुगल क्रोममा
तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर / एन्टिभाइरस सुरक्षा असक्षम गर्नुहोस्
'Err_connection_reset' एक ब्राउजर त्रुटि सामान्यतया तेस्रो-पक्ष सुरक्षा सफ्टवेयरको नतीजा। साथै, यो तपाईंको ब्राउजरमा तेस्रो-पक्ष प्लगइन / विस्तारको कारण हुन सक्छ। एन्टि भाइरस, VPN, वा फायरवालहरू र अनावश्यक ब्राउजर प्लग-इन / विस्तार जस्ता तेस्रो-पक्ष सुरक्षा सफ्टवेयर असक्षम पार्न कोसिस गर्नुहोस्, यसले समस्या समाधान गर्न सक्दछ।
असक्षम / एक्स्टेन्सनको स्थापना रद्द गर्न
एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्।
गुगल क्रोम: क्रोम: // विस्तारहरू / ठेगाना बारमा।
मोजिल्ला फायरफक्स: Shift + Ctrl + A कुञ्जी।
अनावश्यक अनुप्रयोगहरू असक्षम गर्नुहोस् वा हटाउनुहोस्।
साथै, तपाईंको एन्टिभाइरस प्रोग्राम द्वारा समर्थित यदि तपाईंको फायरवाल र वास्तविक-समय स्क्यानि। अक्षम गर्न कोसिस गर्नुहोस्। तपाईं यसको दायाँ क्लिक गरेर एन्टि भाइरस आइकनमा दायाँ कुनामा अवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ घडी भएको छ। यो असक्षम पारिए पछि तपाईंको ब्राउजर र परीक्षण पुनः सुरु गर्नुहोस्। यो अस्थायी हुनेछ, यदि मुद्दा असक्षम पारिए पछि फिक्स गरियो, तब स्थापना रद्द गर्नुहोस् र तपाईंको AV प्रोग्राम पुन: स्थापना गर्नुहोस्।
तपाइँको इन्टर्नेट प्रोक्सी सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित द्वारा, गुगल क्रोम आफ्नो कम्प्यूटर को sock / प्रोक्सी सेटिंग्स को आफ्नो सेटिंग्स को रूप मा प्रयोग गरीरहेको छ। योसँग मोजिल्ला फायरफक्समा जस्तै कुनै निर्मित साक / प्रोक्सी सेटिंग्स छैन। त्यसैले यदि तपाईंले पहिले कुनै पनि प्रोक्सीहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो र यसलाई तपाईंको कम्प्युटरको ल्यान कन्फिगरेसनमा बन्द गर्न बिर्सनुभयो भने, यो कारण हुन सक्छ जुन यस त्रुटिलाई निम्त्याउन सक्छ।
यो मुद्दा जाँच गर्न र समाधान गर्न कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् र इन्टरनेट विकल्पहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ, 'जडानहरू' ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि 'ल्यान सेटिंग्स' मा क्लिक गर्नुहोस्। अब अनचेक गर्नुहोस् 'तपाईंको ल्यानको लागि एक प्रोक्सी सर्भर प्रयोग गर्नुहोस्' विकल्प (यदि चयन गरिएको छ)। र निश्चित गर्नुहोस् कि स्वत: पत्ता लगाउने सेटिंग्स विकल्प चयन गरिएको छ। एकचोटि सकिएपछि, तल अवस्थित 'ओके' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
साथै, नियन्त्रण प्यानलबाट फायरवाल सुरक्षा असक्षम गर्ने प्रयास गर्नुहोस् -> प्रणाली र सुरक्षा -> विन्डोज फायरवाल विकल्प -> विन्डोज फायरवाल खोल्नुहोस् वा बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि छनौट गर्नुहोस् 'विन्डोज फायरवाल बन्द गर्नुहोस् (सिफारिस गरिएको छैन)' प्रत्येक उपलब्ध नेटवर्कको लागि विकल्प।
अधिकतम प्रसारण एकाई (MTU) कन्फिगर गर्नुहोस्
तपाईंको राउटरमा तपाईंको अधिकतम ट्रांसमिशन एकाई कारण कारण हुन सक्छ 'Err_connection_reset।' यसलाई कन्फिगर गर्नुहोस्, जसले समस्या समाधान गर्न सक्दछ। यसलाई कन्फिगर गर्नका लागि तलका चरणहरू हेर्नुहोस्।
पहिले विन्डोज कुञ्जी + आर टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् ncpa.cpl र कुञ्जी प्रविष्ट कुञ्जी थिच्नुहोस्।
यहाँ नेटवर्क जडान विन्डोमा तपाईंको सक्रिय ईथरनेट / वाइफाइ कनेक्शन नाम तल उल्लेख गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि: इथरनेट)।
त्यसो भए अब प्रशासकको रूपमा आदेश प्रम्प्ट खोल्नुहोस् र तलको आदेश प्रदर्शन गर्नुहोस्।
netsh इंटरफेस ipv4 सेट subinterface ' जडान नाम प्रतिलिपि गर्नुहोस् (माथिको छवि हेर्नुहोस्) 'व्यक्ति = १90। ० स्टोर = लगातार
आदेश कार्यान्वयन पछि नयाँ सुरुवात गर्न विन्डोज पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। त्यसो भए खुला पछि कुनै पनि वेब पृष्ठले आशा गर्दछन कि त्यहाँ कुनै बढि गल्ती छैन।
TCP / IP सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्
वेब पृष्ठमा जडानको बखत IP ठेगानामा परिवर्तनले पनि err_connection_reset त्रुटि हुन सक्छ। नेटवर्क एडेप्टर रिसेट, आईपी ठेगाना र नवीकरण DNS लाई पुनःसेट गर्न तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्। जुन यो त्रुटिलाई सुल्झाउन धेरै उपयोगी छ।
प्रशासकको रूपमा फेरि कमाण्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस्। र TCP / IP सेटिंग्स रिसेट गर्न एक पछि कमान्ड प्रदर्शन गर्नुहोस्।
netsh int आईपी रीसेट
ipconfig / नवीकरण गर्नुहोस्
TCP / IP विकल्पहरू रिसेट गरेर पीसी रिस्टार्ट गर्न सिफारिश गरिन्छ र क्रोममा वेबपृष्ठ लोड गर्न सकिन्छ कि भनेर जाँच्नुहोस्।
गुगल क्रोम रिसेट गर्नुहोस्
यदि केस माथिका विधिहरूले समस्याको समाधान गरिरहेको छैन र तपाई यसलाई क्रोम ब्राउजरमा मात्र सामना गर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई क्रोम रिसेट गर्न सल्लाह दिन्छु। यसले क्रोममा सबै कन्फिगरेसन ठीक र सुधार गर्नुपर्दछ र तपाइँले अबदेखि err_connection_reset भेट्नु हुँदैन। रिसेट गर्न:
प्रकार क्रोम: // सेटिंग्स / रीसेटप्रोफाइलसेटिंग्स ठेगाना बारमा र इन्टर थिच्नुहोस्।
अब क्लिक गर्नुहोस् रिसेट गर्नुहोस् ।
यी विन्डोज १० कम्प्युटरमा err_connication_reset google क्रोम त्रुटि ठीक गर्न केहि धेरै लागू हुने समाधानहरू छन्। म आशा गर्दछु कि यी समाधानहरू तपाईका लागि मुद्दा समाधान गर्नुहोस् र क्रोम ब्राउजरले कुनै त्रुटि बिना err_connection_reset बिना सहज रूपमा कार्य गर्दछ। कुनै प्रश्न छ, यस पोस्ट को बारे मा सुझाव तल टिप्पणीहरु मा छलफल गर्न स्वतन्त्र महसुस।
स्थानीय क्षेत्र कनेक्शन फिक्स गर्न मान्य आईपी कन्फिगरेसन विन्डोज १० छैन
कसरी गुगल क्रोम फिक्स गर्न विन्डोज १०, .1.१ र working काम गर्न रोकिन्छ
शीर्ष १० टिप्स क्रोम ब्राउजरलाई times पटक छिटो वेग दिन
गुगल क्रोम ध्वनि काम गरीरहेको छैन? यहाँ कसरी समस्या समाधान गर्ने
माईक्रोसफ्ट एज विन्डोज १० बाट हरायो? यहाँ छुटेको एज ब्राउजरलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने
nvidia gefor स्थापना गर्न असफल भयो
कसरी शब्दमा चित्रण गर्ने
विन्डोज अपडेट कसरी रिसेट गर्ने
क्रोम cpu को धेरै प्रयोग गरेर
ड्राइभर wudfrd लोड गर्न असफल भयो